या त बाल सदन वा स्कूलमा हरेक शरद ऋतु एक प्रदर्शनी आयोजित प्राकृतिक सामाग्री देखि गरे हस्तशिल्प को। Kiddies र आमाबाबुको शिक्षकहरू घटना भाग र आफ्नो काम, काठ, तरकारी, फलफूल र फूल बनेको देखाउन आमन्त्रित गरिन्छ। सबै आमा र पिताजी के यस्तै विषयगत प्रदर्शनी मा देखाउन गरेको कसरी र देखि गर्न सकिँदैन के, को बारेमा जानकारी को खोज मा इन्टरनेट खुला रिक्त सर्फ गर्न सुरु गर्दा र छ। र तपाईं यो पृष्ठ हेर्न को लागि, यो अर्थ तपाईं, प्रिय आमाबाबुले, दायाँ ट्रयाक मा। यस लेखमा तपाईंको ध्यान एक मास्टर वर्ग, ठूलो विस्तार मा वर्णन गरिएको छ जो स्याउ देखि ट्रयाक बनाउने प्रक्रिया प्रदान गरिएको छ। यो Hack चाँडै सबैभन्दा सुलभ सामाग्री गरेको र सजिलै छ। बच्चा Toothpicks र एक चक्कु अनुपालनको को नियम प्रयोग नियन्त्रण गर्न मात्र आवश्यक छ पूर्णतया आफ्नो भाग मा गर्न यो स्वामित्व गर्न सक्षम हुनेछ। त्यसैले, मास्टर-वर्ग मा एक नजर।
Hack "कमला स्याउ"
अर्डर यस्तो उत्पादन उत्पादन मा, निम्न सामाग्री तयार:
विभिन्न आकार को स्याउ -5टुक्रा;
Viburnum जामुन वा पहाड खरानी -2टुक्रा;
एक बोर्ड वा गत्ता टुक्रा।
विनिर्माण प्रक्रिया शिल्प को विवरण: स्याउ को एक कमला कसरी बनाउने
स्याउ एक पंक्ति मा, क्रमबद्ध तिनीहरूलाई परिमाण गरेर, बगालको सबै भन्दा ठूलो देखि राखे।
Toothpicks संग स्याउ सँगै कस्नु। Punctures जहाँ फल को पुच्छर fastened थियो ठाउँमा र विपरीत पक्ष, जहाँ आँखा मा प्रदर्शन। हालै, एप्पल peephole पहिले राखिएको छ।
गाजर स्याउ स्टेम को लाभ्रेकीरालाई लागि के गर्न आवश्यक छ। तरकारी छ वा आठ टुक्रा मा कटौती र तल (दुई प्रति फल) मा स्याउ लागि Toothpicks तिनीहरूलाई संलग्न। पछिल्लो मा, पुच्छर मूर्तिहरु छ जो सानो फल, खुट्टा अपनाउँछन् गर्न सक्दैन।
rowan को Viburnum जामुन वा floss वा प्रयोग plasticine को सानो टुक्रा तिनीहरूलाई संलग्न, पहिलो, सबै भन्दा ठूलो स्याउ, आँखा पालना गर्नुहोस्।
जहाँ तथ्याङ्कले टोंटी हुनेछ अंगूर, त्यहाँ हुक।
Plasticine रातो फेशन राम्रो ससेज 2-3 सेमी को आकार, एक अर्ध-सर्कल मा गुना र आफ्नो हात-गरे लेख एक मुस्कान गठन, उत्पादन गर्न संलग्न गर्नुहोस्।
स्याउ को लाभ्रेकीरालाई पनि सीङ हुन सक्छ। तिनीहरूले सुक्खा twigs, मिलान वा माटो को टुक्रा बाट गर्न सकिन्छ। यसलाई यो डंठल को भाग र अर्को एक कप थियो भनेर स्याउ मा एक दांत कोट्याउने सिन्का सम्मिलित आवश्यक छ।
यो तथ्याङ्कले यौन विशेषताहरु देखि प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ। सुकेको फूल वा पात को एक टाउको सजावट मा कमला केटी-ट्रेलर, उनको rowan जामुन को एक हार बनाउन। आंकडा पुरुष पोशाक सक्नुहुन्छ कागज बनेको एक टोपी-सिलेंडर पहिलो र दोस्रो बुल्सआइ रिबन बाट पुतली-टाई को जंक्शन एकछिन पर्ख।
बस स्याउ बनाइएका एक कमला मनपर्छ। मलाई आफ्नो बच्चा स्कूल वा किंडरगार्टन बस यस्तो सुन्दर र मौलिक शिल्प गर्न ल्याउन धेरै खुसी हुनेछ विश्वास गर्छन्। एक कमला कुनै पनि प्रदर्शनी मा एक योग्य हुनेछ। प्रेरित, सपना प्राप्त र सिर्जना!
अभिनेता Terri Lermitt: जीवनी र जीवनको रोचक तथ्य
विभाजित सिस्टम: यो के हो र यो कसरी काम गर्छ?
कीमा बनाएको मासु संग Puff केक को एक स्वादिष्ट रोल बनाउन
प्रति 1 m2 बीउ घाँस को खपत के हो?